ပညာမရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့အင်္ဂါရပ်များနှင့် သူတို့နှင့်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနည်း ? - JAPO Japanese News
လာ 16 Mar 2020, 10:14 မနက်
ဘာလို့ ဒီလူ ဒီလောက်ရိုးရှင်းတဲ့စကားကိုနားမလည်နိုင်ရတာလဲ ? ?
ဟုတ်တယ်နော်၊ အဲလိုထုံအတဲ့သူတွေနဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ တော်တော်ပင်ပန်းတယ်။
အခုပြောတာက စာဘယ်လောက်တော်နေနေ ပညာတတ်လို့ ပညာရှိဆိုပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျောင်းစာပညာရေးမှာ ထူးချွန်တာနဲ့ ပညာရှိပြီး ဉာဏ်ကောင်းတာနဲ့က ထပ်တူညီနေတာမဟုတ်လို့ပါပဲ။
သင်ရော မဟုတ်မှလွဲရော ဘေးပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကနေ ဉာဏ်မကောင်းတဲ့သူ ပညာမရှိတဲ့သူလို့ အထင်ခံရဘူးလား?
ပထမဆုံး ပညာမရှိတဲ့သူတွေရဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။
ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိတယ်နော်။ အမြဲတမ်းသူ့အကြောင်းသူပဲပြောနေတဲ့သူမျိုး။ တခြားသူစကားပြောနေရင်လည်းကြားဖြတ်ပြီး သူပြောချင်တာဝင်ပြောတဲ့သူမျိုး။ ဒီလိုလူမျိုးဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလွဲပြီး အခြားသူကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့လူမျိုးပါ။ ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင် “စကားပြောတာကိုနားမထောင်လို့” ပညာမဲ့တဲ့သူ လို့ မြင်ရစေပါတယ်။
ကိုယ်ကောင်းဖို့ပဲစဉ်းစားတယ်။ ကိုယ်ကောင်းနေရင်နောက်ပိုင်းဖြစ်ချင်ရာဖြစ် အေးဆေးပဲ၊ သူနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူမျိုး။ ဒီလိုလူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်။
ညှိနှိုင်းမှုကင်းမဲ့ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုမမြင်နိုင်တဲ့သူတွေဟာ ပညာရှိမဟုတ်ကြောင်းကို တွေ့မြင်ဖို့လွယ်ကူတာဟာ အသေအချာပါပဲ။
နားမလည်တာကိုနားမလည်ဘူးလို့ မေးလိုက်ရင် အသိပညာတွေတိုးပွားလာမှာပါ။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ နားမလည်တာကို နားလည်သလို လူတတ်ကြီးလုပ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နော်။ ဒါဟာလည်း ပညာမဲ့သူလို့ထင်ရစေပါတယ်။
ဒီလိုလူမျိုးတွေ ခင်ဗျားတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိလား ?
သူတို့နဲ့စကားပြောတွေ့ဆုံတဲ့အခါ ပင်ပန်းတယ်လို့ တွေးနေတဲ့ စာဖတ်သူတို့အတွက် သူတို့နဲ့ဘယ်လိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမလဲဆိုတာကို ပြောပြမယ်နော်။
သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ပြောပုံဆိုပုံလုပ်ရပ်အားလုံးကိုစိတ်ပူမိ ဂရုစိုက်နေမိပြီဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားစိတ်တိုမိလာမှာပါ။ ဒါကြောင့်စိတ်ထဲမထားနဲ့။ စိတ်တိုလာမိတာနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပါရှုံးနှိမ့်သွားမှာနော်။
၂။ အရေးကြီးတဲ့အရာတွေကို စာဖြင့်ချန်ထားပေးပါ။
မင်း ကိုငါ ပြောခဲ့တာပဲ ! “ ငါမပြောခဲ့ပါဘူး!” စသဖြင့်ပေါ့ အငြင်းသန်တဲ့အရာဟာလည်း သူတို့ရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေပါပဲ။ ဒါကြောင့် အငြင်းမပွားရအောင် အ‌ရေးကြီးတဲ့အရာတွေကို စာနဲ့ မှတ်ထားပြီး သူ့ဆီကိုလည်းပို့ထားပါ။ အငြင်းပွားတယ်ဆိုတာ အချိန်ဖြုန်းခြင်းတစ်ခုပါပဲ။
ပညာရှိသူတစ် ဦးကို ကိစ္စ ၁ခု ရှင်းပြရင် သူတို့က ကိစ္စ ၁၀ ခုလောက် နားလည်နိုင်တယ်လို့ဆိုရလောက်အောင် ခေါင်းထဲမှာ မှတ်ထားတတ်တဲ့ သူမျိုးတွေပါ။ ဒါပေမယ့် ပညာမရှိတဲ့သူတွေကတော့ ၁၀ခု ပြောပြလည်း ၁ခုတောင် မှတ်ထားချင်မှမှတ်ထားမှာပါ။ အဲလောက်တောင် အတွေးအခေါ်တွေကောင်းတာနော်။
ပညာမဲ့သူတွေဟာ မိမိတို့ကိုယ်ကို‌တော့ သတိမပြုမိကြပါဘူးတဲ့။
ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနဲ့ ငါကစမတ်ကျတယ်၊ ပညာရှိတယ်လို့ ထင်ပြီး ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကိုတော့ ငတုံးတွေ ၊ ဉာဏ်နည်းတဲ့သူတွေလို့ တွေးနေတတ်ကြတယ်တဲ့။
ခင်ဗျားရော ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လိုလူမျိုးလို့ထင်မိလည်း? အေးအေးဆေး‌ဆေး စဉ်းစားပြီးမှ သေချာ အတည်ပြုကြည့်ပါနော်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးကို မပြောသင့်တာပြောခဲ့တဲ့ ဦးလေးကြီး